Sagal Radio Services • News Report • August 20, 2015
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen oo maanta dib ugu laabtay magaalada Jowhar ayaa meel fagaare ah ka sheegay in uusan jirin illaa iyo hadda heshiis laga gaaray maamul u sameynta labada gobol marka laga reebo saxiixa heshiiska maamul u sameynta labada gobol.
Ciidamada Itoobiya oo rasaas ku furay gaari ay la socdeen dad rayid ah duleedka Halgan
Wararka ka imaanaya Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ay dad rayid ah ku laayeen deegaanka Halgan.
Cutubyo ka socda Ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wada Gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, iyadoo ciidamadan oo wehliya kuwa dowladda ay duulaan ku yihiin deegaanada Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobolkaas.
Sagal Radio Services • News Report • July 23, 2015
Ciidamo Jabuutiyaan ah oo ku hubeysan gaadiid dagaal oo casri ah oo soo gaaray Beledweyne (Sawiro)
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa shalay iyo maanta soo gaarayay ciidamo Jabutiyan ah oo ku hubeysan gaadiid dagaal oo casri ah kuwaasoo qeyb ka ah ciidamada nabad ilaalinta AMISOM.
Maxaabiis ka baxsatay Xabsiga dhexe ee Baledweyne
Xabsiga Dhexe Magaalada Baladweyne Xarunta Gobalka Hiiraan waxaa ka baxsaday Maxaabiis ku Xukunaa Xukuno kala duwan.
Maamulka Gobolka Hiiraan oo ka digay Colaada ka taagan deegaanka Deefoow
Sagal Radio Services • News Report • October 7, 2014
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa maanta digniin ka soo saaray dagaallada iska soo daba-noqday ee marar badan oo hore ka dhacay deegaanka Deefoow 35-km dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne.
Rag hubeysan oo xalay Guddoomiye deegaan ku dilay Magaalada Beledweyne
Labo ruux oo hubeysan ayaa xalay ku dilay xaafada howl-wadaag ee magaalada Beledweyne guddoomiyihii deegaannka Buq-goosaar 55 km, dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Beledweyne.
Maamulka Gobolka Hiiraan oo Gacanta ku dhigay Dad Gobolka Dil ka geystay
Sagal Radio Services • News Report • June 10, 2014
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan C/fitaax Xasan Afrax ayaa sheegay in Ciidamada Amaanka Dowladda Soomaaliya ee Gobolka Hiiraan ay soo qabteen Koox Dad Shacab ah ku dilay Deegaanka Beergadiid ee Gobolka Hiiraan.
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo sheegay inay gacanta ku dhigeen gabar dooneysay inay is qarxiso
Sagal Radio Services • News Report • May 21, 2014
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan C/fataax Xasan Afrax oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyn ayaa ka warbixiyay howl galo maalmihii u dambeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ka wadeen magaalada.
Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Hiiraan oo si rasmi xilka ula wareegay, balan qaadayna...
Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Hiiraan C/fataax Xasan Afrax ayaa shalay si rasmi ah xilka ula wareegay, isagoo balan qaaday in tallaabada ugu horeysa ee uu Maamulkiisa diirada saarayo ay tahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa guud ahaan Gobolka Hiiraan.
DEG DEG: Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo goor dhow loo magacaabay C/fataax Xasan Afrax
Sagal Radio Services • News Report • April 15, 2014
Wareegto ka soo baxday Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa goor dhow xilka Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan loogu magacaabay C/fataax Xasan Afrax, kadib markii xilka laga qaaday Gudoomiyihii hore Cabdi Faarax Laqanyo.
Ciidamada Jabuuti oo ku hanjabay Bishaan inay ka saarayaan Al Shabaab G/Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • April 8, 2014
Taliyaha qeybta Afaraad ee gobolka Hiiraan Ciidamada Jabuuti Cali Cabdoow ayaa ku hanjabay inay inta bishaan ka dhiman uga saari doonaan Al Shabaab gobolka Hiiraan.
Ciidamada XDS Iyo Kuwa AMISOM Oo La Wareegay Deegaanka Fiidoow Ee G/Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • March 19, 2014
Ciidamada DFS oo garabsanaaya kuwa AMISOM ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta deegaanka Fiidoow oo dhaca xadka kala qeybiyo gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Dagaal ka soo cosboonaaday Qeeba ka mid ah Hiiraan
Dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo Xoogaga Al-Shabaab ayaa xalay ka dhacay degmada Buulo Burde, habeen kadib markii ciidamada huwanta gelinkii dambe ee khamiisti ay qabsadeen degmadaas muhiimka ah.
Shabaab oo weerartay saldhig ciidanka dowladda ay ku leeyihiin duleedka Beledweyne
Dagaal u dhaxeeyay ciidanka dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa habeenkii Axadda ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Wafdiga Ka Socda AMISOM Oo Dhanka Jinsiga Qaabilsan Oo Gaaray Beladweyne
Sagal Radio Services • News Report • February 26, 2014
Wafdigan oo ka socday Xafiiska Garabka Haweenka ama jinsiga (Gender) ee AMISOM ayaa gaaraya ilaa 10 xubnood waxaana ay gaareen Magaalada Beladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Al-Shabaab oo ka dhaqan-gelisay mamnuucista internet-ka qeybo ka tirsan Hiiraan
Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xalay fiidkii deegaanno qaar ah oo ka tirsan gobolka laga jaray adeegga Internet-ka ee ay bixin jireen shirkadaha isgaarsiinta, gaar ahaan shirkadda Hormuud.
Maamulka G/Hiiraan Oo Muwaafaqo Dhex Dhigay Beelo Ku Dagaalamay Deegaanno Ka Tirsan Gobolkaasi
Maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa ku guuleystay in ay heshiis kala dhex dhigaan Laba maleeshiyo beelood oo dhawaan ku dagaalamay deegaanno ka tirsan gobolkaasi.
Cutubyo Ka Tirsan Ciidamada Qalabka Sida Iyo Kuwa AMISOM Oo Howlgal Ka Sameeyay Deegaanno Ka Tirsan G/Hiiraan(Sawirro)
Howlgallo gaadiid lagu soo furtay oo ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM ka sameeyeen deegaanno ka tirsan Hiiraan.
Maamulka Gobolka Hiiraan oo soo Ban-dhigay Raashin ay ku soo Qabteen Howlgal laga Sameeyay Saldhigyada Al-shabaab
Sagal Radio Services • News Report • November 29, 2013
Mas’uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada ayaa goor dhaw oo maanta ah ku soo bandhigay saldhiga booliiska magaalada Beledweyne raashin sida ay sheegeen saraakiisha lagu soo qabtay howlgal laga sameeyay saldhigyo Al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanno ka tirsan gobolka.
Ciidanka Dowlada oo sakay Howl-gal dad lagu soo qabqabtay ka sameeyay B/weyne
Ciidamada qalabka sida ee ku sugan magaalada Beledweyn ayaa howlgallo ay sameeyeen ku soo qab qabtay dhalinyaro looga shakiyay iney ku lug leeyihiin falalka amnidaro ah oo mararka qaar ka dhaca qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan.
Ciidanka Dowlada iyo AMISOM oo ay wahliyaan Itoobiya oo ku sii jeeda dagaani ka mid ah Hiiraan
News Report • November 24, 2013
Ciidanka Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee Nabad ilaalinta u jooga Dalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay u kaceen dhankaa iyo deegaana ka mid ah Gobalka hiiraan si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka Shabaab.
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay duulaan ku yihiin deegaano ka tirsan Gobolka Hiiraan oo ay ku jirto degmada Buulo Burde oo Al-Shabaab ay maamulaan.
Sagal Radio Services • News Report • October 13, 2013
Gudoomiye kuxigeenka dhinaca Siyaasada Gobolka Hiiraan Maxamed Ibraahim Cali ayaa sheegay inay soo gaba gabeeyeen qorshihii lagu weerari lahaa deegaanada ay Gobolka kaga sugan yihiin Al-Shabaab.